Modafinil vs Adderall: Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato [Hagaha Isticmaalaha Buuxa]
Dadka guuleysta waxay had iyo jeer raadinayaan waxaas yar ee dheeriga ah ee iyaga siin kara inay ka adkaadaan tartankooda ama ka dhigaan inay wax yar uun ka fiicnaadaan. Goor dhow ama goor dambe, waxay ku turunturoon doonaan Modafinil ama Adderall. Daawooyinkani waxay si weyn u kordhin karaan diiradda, feejignaanta, feejignaanta, iyo dhiirigelinta. Midkee ayaa fiican, in kastoo? Sidee ayuu hamiga fulinta ama ardayga dadaala u go'aansadaa midka uu qaadanayo?
Ugu horreyntii, labada daroogoba waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo xaaladda caafimaad, narcolepsy. Labadooduba waxay abuuraan dareen soo jeedin ah qofka qaadanaya. Labadaba sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ADHD iyo dhibaatooyinka kale ee garashada, laakiin Adderall ayaa ah kan kaliya ee labadaba ay u ansixisay FDA xaaladan halka Modafinil ay u qoreen astaan ​​ka baxsan bulshada dhimirka. In kasta oo labadan daroogo isku mid yihiin, haddana waxa jira farqi u dhexeeya iyaga.
Maqaalkan, waxaan ku eegaynaa kala duwanaanshaha iyo isku ekaanshaha Modafinil iyo Adderall.
Adderall waa cilmi nafsi, Modafinil waa eugeroic. In kasta oo Modafinil loogu talagalay ugu horreyn in lagu daaweeyo narcolepsy, hurdo la'aanta hurdada, iyo wareejinta shaqada hurdo la'aanta, Adderall ayaa inta badan lagu soo dallacaa daaweynta ADHD.
Isticmaalayaashu waxay aad ugu dhowdahay inay noqdaan kuwo jir ahaan ama maskax ahaanba ku tiirsan Adderall.
Modafinil: Modafinil wuxuu u dhaqmaa sidii wax kiciya, laakiin maaha sida Adderall sameeyo. Waxay kordhisaa feejignaanta dareenka waxayna kordhisaa tamar iyadoo kor u qaadeysa feejignaanta jirka iyo maskaxda. Marka, waxaad awood u leedahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid mowduucyada aad baranayso muddo dheer, waxaadna leedahay awood badan oo aad ku dhex fahan karto. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii aad isku dayeyso inaad ku xareysato waxyaabo badan imtixaan weyn. Iyo, haddii aad qabtid ADHD, waxay kaa caawin doontaa inaad diirada saarto oo aad diirada saarto sidii hore.
Qaarkood waxay yiraahdeen Modafinil waa nooc fudud, oo fudud oo ah Adderall.
Adderall: Adderall waa kiciye xoog leh, waxayna ka shaqeysaa neurotransmitters-ka taas oo kordhisa howlaha CNS iyo nidaamka neerfaha durugsan. Waxay ka hortageysaa narkolepsy iyo ADHD adoo kicinaya sii deynta weyn ee adrenaline. Waxay kaloo kordhisaa socodka dhiigga. Dadka qaarkiis waxay soo sheegaan dareenka tamarta kordhay, dhiirigelinta, iyo xoogga.